Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ emelitere » Ime ka ndị dike DC na Villians site na egwuregwu ekwentị
Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • Akụkọ emelitere
Egwuregwu mkpanaka RPG egwuregwu mgbaghoju anya mbụ nke nwere akara ngosi DC na-abịarute na 2022 ma meghere ya maka ngagharị iwe.
Onye na-eduzi ihe omume ntụrụndụ ekwentị Ludia, ụlọ ihe nkiri Jam City, ekpughere taa DC Heroes & Villains, egwuregwu egwuregwu egwuregwu egwuregwu mbụ-3 (RPG) setịpụrụ na DC Universe, nke Warner Bros. Interactive Entertainment nyere ikike n'aha DC. Egwuregwu ahụ ga-atọ ndị na-egwu egwu DC ụtọ na akụkọ mbụ nke gosipụtara ihe nkedo kpakpando niile nke Super Heroes na Super-Villains gụnyere Batman, Superman, Wonder Woman, Joker na Harley Quinn. DC Heroes & Villains ga-adị n'ụwa niile na mbido 2022 na App Store na Google Play. Malite taa, ndị dike na ndị ọjọọ nwere ike ịdebanye aha maka ịnweta egwuregwu ahụ wee nata ihe onyinye pụrụ iche na mmalite, na www.dcheroesandvillains.com.
N'igosi akụkọ bara ọgaranya, nke mbụ, DC Heroes & Villains na-eweta ọnọdụ akara ngosi dị ka okporo ụzọ Gotham City na omimi nke Atlantis na ndụ. Ọkụ dị omimi ewepụla ndị ike niile na ọ ga-abụ ndị egwuregwu ka ha were ndị otu ike kacha elu, site n'akụkụ abụọ nke ikpe ziri ezi, iji gbochie mkpochapụ kpamkpam.
Ndị na-egwu egwuregwu ga-adị mkpa ka ha bụrụ atụmatụ ka ha na-agagharị na egwuregwu siri ike nke DC Heroes & Villains, jupụtara na otu egwuregwu egwuregwu-3 ọgụ na mmemme otu ebe ha ga-achọ ịkpọkọta ndị otu ha ka ha merie ndị isi maka ụgwọ ọrụ. Ihe omume ndụ akwadoro gụnyere egwuregwu PVP na Guild Raids ga-eme ka ndị na-akwado DC si n'akụkụ ụwa niile gbakọọ aka n'ọgụ maka ụgwọ ọrụ pụrụ iche n'ime egwuregwu.
Alex Thabet, onye isi Ludia kwuru, "Anyị nwere nnukwu mpako ịkpọsa aha ọhụrụ anyị, DC Heroes & Villains." "Egwuregwu a na-egosipụta ihe kachasị mma nke Ludia, yana egwuregwu egwuregwu na teknụzụ ọhụụ bụ akara ngosi egwuregwu anyị na-enweta mmeri. Anyị kwenyere na nke a ga-enye ndị na-akwado DC echiche ọhụrụ nke agwa, gburugburu na akụkọ ha hụrụ n'anya. "
"Anyị enweghị ike ịmasị anyị na DC Heroes & Villains, nke na-etinye nkà na ihe okike Ludia na ngosipụta zuru oke," Chris DeWolfe, onye nchoputa na onye isi oche nke Jam City kwuru. "Nke a ga-abụ nke mbụ ndị na-akwado DC nwere ike ịmepụta otu nrọ nke ha na egwuregwu egwuregwu-3, na-ejikọta ma ndị dike na ndị ọjọọ. Obi siri m ike na ihe ha nwere ike ime n'egwuregwu ahụ ga-agba ndị Fans ume.
Jam City mechara nweta Ludia n'oge na-adịbeghị anya na Septemba 2021, na-aga n'ihu na-emezu ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ iji kwalite Pọtụfoliyo zuru ụwa ọnụ nke ụlọ ihe nkiri kachasị elu nke na-etolite ma na-ebipụta egwuregwu sitere na IP nke mepere emepe na nke atọ nwere ikike.